Bing Crosby — Wikipediya
Harry Lillis Crosby (Tacoma, Etaazuunii, Mee 3, 1903-Alcobendas, Spain, Ọktọba 14, 1977), onye akpọrọ akpọrọ Bing Crosby, bụ onye America na-agụ egwú (crooner) na onye na-eme ihe nkiri na ọkara ọrụ narị afọ. Kpakpando kpakpando mbụ, Bing Crosby bụ onye kacha ere ma na-eme nke ọma na egwu egwu na narị afọ nke 20 n'ụwa niile.
Crosby bụ onye ndu na ndekọ ndekọ, ọnụego redio, na nnukwu ihe nkiri na - enweta - otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma nwee mmetụta na narị afọ nke 20 n'ụwa niile. Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na-ese ihe nkiri. N'agbata 1934 na 1954, Crosby nwere onye na-akwụsi ike imeri ya na album ya, nnukwu ọkwa na redio, na fim ndị ama ama n'ụwa. A na-elekarị ya anya dị ka otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri kachasị ewu ewu na akụkọ ntanetị ma bụrụ ụda olu mmadụ ka edekọtara nke ọma taa. Ndị na-eme arụrụala ụmụ nwoke ndị mụpụtara ya, dị ka Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, John Lennon, Elvis Presley, Michael Bublé ịgụta aha ole na ole.
Bing Crosby erewo ihe karịrị otu ijeri nde na ụwa niile ruo taa, ikekwe onye na-ere ndekọ kachasị ukwuu na akụkọ ntanetị, yana abụ kacha mma ere n'ụwa a akpọrọ ekeresimesi White, ya na ndị ọzọ E rere 50,000,000 erere n'ụwa niile.5 Crosby bụ onye ama ama ma bụrụ onye ama ama n'etiti etiti narị afọ nke 20 na ụwa nke na nnyocha e mere laa azụ n'oge ahụ kpughere na Crosby bụ onye a ma ama na nsọpụrụ karịa Pope Pius XII n'oge ahụ. Ọganiihu nke eserese ya ka bụ ihe dị egwu: kaadị 396 dị iche iche, gụnyere 41 Nke 1. Ọ bụrụ na ị gụọ ọtụtụ oge "akara ekeresimesi", nke ahụ ga-eweta ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 43, karịa. Beatles na Elvis Presley jikọtara ọnụ. Crosby nwere usoro eserese dị iche iche n'afọ ọ bụla n’agbata 1931 na 1954, gbakwunyere na ya nwere 24 dị iche iche na-ewu ewu na-alụ ọhụrụ na 1939 naanị. Bing Crosby dere ihe ndekọ 2,000 nke ihe ndekọ azụmahịa na ihe dị ka ihe ngosi redio anọ dị 4,000, gbakwunyere ndepụta sara mbara nke ihe nkiri na ihe nkiri telivishọn, ọ bụ ya bụ onye kachasị ede akụkọ egwu na akụkọ ntanetị. Bing Crosby gbara ihe ndekọ 41 Nke 1 na eserese (43 gụnyere isi nke abụọ na nke atọ maka "White ekeresimesi"), karịa Beatles nwere (24) na Elvis Presley nwere (18) ndekọ. Edekọ ya ruru na eserese 396 ugboro, karịa Frank Sinatra (209) na Elvis Presley (149) jikọtara ọnụ.
Crosby kwupụtara abụ Oscar a họọrọ 13, nke anọ meriri Academy Award maka Song kacha mma: "Leilani ụtọ" (agbamakwụkwọ Waikiki, 1937), "White Christmas" (Holiday Inn, 1942), "Swinging na Kpakpando ”(ingga Myzọ M, 1944), na“ Na Jụụ, Cool, Cool of the Night ”(Lee Abịa na Nwunye, 1951).
Enyerela Bing Crosby kpakpando atọ na Hollywood Walk of Fame: otu maka ndekọ, otu maka redio, otu maka fim.
Bing Crosby bụ onye omenkà kacha edekọ akụkọ ihe mere eme nwere ihe ruru narị abụ anọ na-ere ere n'ụwa, ihe mmeri nke na onweghị onye gụnyere Frank Sinatra, Elvis Presley, Beatles na Michael Jackson abịala nso maka ịha.
Crosby edeela ihe anọ a na-eme na Grammy Hall of Fame, nke bụ onyinye pụrụ iche e guzobere na 1973 iji sọpụrụ ndekọ nke "tozuru oke na akụkọ ihe mere eme".
Pɩɖaɣna mʋʋna "https://kbp.wikipedia.org/w/index.php?title=Bing_Crosby&oldid=14610"
Dernière modification le 21 Agoza fenaɣ 2020, à 12:43
Takayahayʋʋ kɩfalʋ wayɩ wayɩ ñɩŋgʋ ñɔɔzɩtʋ 21 Agoza fenaɣ 2020 wiye, 12:43 yɔɔ.